फिनिलप्रेरिक्सेटम (कार्पडेरोन) पाउडर (77472-70-9) ≥98% | निर्माताहरू
/ उत्पादन / नोट्रोपिक्स पाउडर / Phenylpiracetam (Carphedon) पाउडर
SKU: 77472-70-9. श्रेणी: नोट्रोपिक्स पाउडर
AASraw ग्रंथ बाट फेनिलप्रिराकुटिम (कार्पडेरोन) पाउडर (77472-70-9) को सीजीएमपी विनियमन र ट्र्याबल योग्य गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत संश्लेषण र उत्पादन क्षमताको साथ हो।
फिनेलिप्पासिटेम (कार्पडेरन) पाउडर भिडियो
फिनेलिप्पामाटेम (कार्पडेरन) पाउडर आधारभूत क्यारेक्टरहरू:
नाम: फिनेलिप्पामाटेम (कार्पडेरन) पाउडर
आणविक सूत्र: C12H14N2O2
आणविक वजन: 218.25
पिघल प्वाइन्ट: 129.5-130.5 ° C
भण्डारण अस्थायी: फ्रिज
रंग: सेतो वा बन्द सेतो पाउडर
स्टेरियोड्स चक्रमा फिनेलिप्पासिटेम (कार्पडेरन) पाउडर
फिनेलिप्पाटेटिम पाउडर, फिनेट्रोपिल पाउडर, कार्पडेन पाउडर
phenylpiracetam पाउडर उपयोग:
100-200 मिलीग्राम प्रति खुट्टा बाट फेनेलिप्चेटेटम पाउडरनजेजको एक सामान्य खुराक, दिनको तीन चोटि सम्म लिइएको छ। यसको प्रभावकारी प्रभावहरूको कारण, यो खुल्ला दायराको निचो अन्तमा सुरु गर्न सिफारिस गरिन्छ र आवश्यक भएमा बढ्दै जान्छ।
फेनेलिप्पामाटेम पाउडरको सहनशीलता अपेक्षाकृत छिटो विकास गर्न रिपोर्ट गरिएको छ। यसैले, यो यसलाई दैनिक पूरकको रूपमा लिने सल्लाह दिइएको छैन तर यसको सट्टा तपाईको क्षमतालाई अझ बढाउनको लागी जब तपाइँलाई यो भन्दा बढी चाहिन्छ वा यसलाई समय-समयमा चक्र गर्न।
अधिकांश केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र उत्तेजनाहरु लाई केहि हद सम्म घर्षण, चिंता र चिन्ता लाग्दछ। कार्पर्डन पाउडरले यी साइड इफेक्टहरूको कारण हुन सक्छ, यो यस पूरकसँग अन्य धेरै उत्तेजकहरू भन्दा कम सम्भावना छ। Carphedon पाउडर वा Phenylpiracetam पाउडर खुराक सजगता बढ्न सक्छ र कम साइड इफेक्ट र अन्य उत्तेजनाहरु भन्दा कम जोखिम संग संज्ञानात्मक क्षमता को बढावा दिन सक्छ।
Carphedon पाउडर र Oxiracetam को racetam परिवार को दुई सबै उत्तेजना सदस्यहरु मानिन्छ र दुवै राम्रो विकल्प छन् यदि तपाईं आफ्नो सतर्कता बढाउन चाहनुहुन्छ।
के फिनेलप्पाटेमम पाउडरबाट मैले के प्रकारको परिणामको अपेक्षा गर्नुपर्छ?
फेनिलप्पासिटेम पाउडर सबैभन्दा शक्तिशाली नोट्रोपिक्स मध्ये एक हो जुन आज बजारमा उपलब्ध छ। यो racetam परिवारबाट एक अपेक्षाकृत नयाँ नोटोप्रोक हो र मूल नोटोट्रिक पिरासिटमको परिमार्जित संस्करण हो, यसको बाहेक यो 30 60 गुणा बढी शक्तिशाली हुन्छ, राम्रो न्यूरोप्रोटिक गुणहरू छन् र शारीरिक प्रदर्शन बढाउँछ। यी सबै कारणहरूका लागि, फिनेलिप्सेमाटेम पाउडर तीव्र रूपमा नोथ्रोपिक प्रयोगकर्ताहरू बीचको प्रचलन बढ्दै गएको छ।
स्ट्रक्चरल, फिनेलिप्चेटम पाउडर अनिवार्य रूप देखि संलग्न एक फिनेल समूह संग पिरासिटिम हो। यसले यसलाई पिरासिटाममा एकदम राम्रो बनाउँछ, यसको आमाबाबु अणु, तर फेनिल समूहको थपले निम्न दुई तरिकामा सुधार गर्छ:
1। थप क्षमता - अणु-रक्त बाधा (बीबीबी) लाई सजिलो पार्न कोणले अनुमति दिएर बढेको शक्ति र बलियो प्रभावहरू प्रभावकारी।
2। सक्षम पार्नु - अधिक उत्तेजक प्रभाव एक phenethylamine पदार्थ को करीब निकटता को कारण, जस्तै Adderall।
अन्य racetams को तुलना मा, phenylpiracetam पाउडर एकदम शक्तिशाली छ र एक उच्च bioavailability हो जब पनि मौखिक रूप देखि ingested। यसको आधा जीवन मानवमा 3-5 घण्टा वरिपरि छ।
चेतावनी (Carphedon पाउडर) Phenylpiracetam पाउडर:
रीसेटम कक्षामा अरू नोटोप्रोक्सहरू जस्तै, अनुशंसित खुट्टाहरूमा लिँदा पूरै फिनेलप्सेसिटाम पाउडरबाट केही प्रभावकारी साइड इफेक्टहरू छन्। यदि तपाइँ सिरदर्द अनुभव गर्नुहुन्छ भने, यो एक चिन्ह हो जुन तपाइँले तपाइँको कोलोन पूरक थप्न वा बढाउनु पर्छ, जुन racetams लिँदा सामान्यतया सिफारिस गरिन्छ।
Phenylpiracetam पाउडर पिरासिटाम भन्दा अधिक प्रभावकारी ढंगले मेमोरी र समग्र सिग्नसन बढ्छ, मस्तिष्कलाई सुरक्षित गर्दछ र शारीरिक प्रदर्शन बढाउन रिपोर्ट गरिएको छ। यसको प्रभाव र शक्तिशाली स्वभावको कारण फिनेलिप्पासेटेमम पाउडर कुनै न्युरोपिक स्ट्याकको लागि एक ठूलो अतिरिक्त हो। विशेष गरी, एथलीटहरू र विद्यार्थीहरूले यसको उत्तेजित र उत्प्रेरित गुणहरूको कारण सबैभन्दा बढी लाभ उठाउन सक्छन्। उल्लेख गर्न, यो एक मूल्यवान बोनस हो जो तनाव को लागि बढ्दो सहिष्णुता प्रदान गर्दछ।
फिनेलिप्पाटेटाम पाउडर पनि दिदी र शरीर दुवैको प्रदर्शन बढाउनको लागि रूसी सैनिकों र सेन्ट्रोनटटहरुलाई पनि दिइएको छ।
अध्ययनमा, फेनलिप्सेमाटेम पाउडरले निम्न प्रभावहरू देखाएको छ।
मेटिनेशियामा रोगीहरूमा मेमोरी सुधार, ध्यान-स्विचिंग, र समस्या समाधान गर्ने क्षमताहरू सुधार गर्नुहोस्।
लोकोमोटर र एंटीडेप्रिन्टेंट गतिविधि बढाउनुहोस् र चूहहरुमा मेमोरी सुधार गर्नुहोस्।
एनेनीशिया को प्रभावहरु लाई कम गर्न र कम गर्न को लागी।
प्रेरित प्रतिरक्षा तनाव संग चूहों मा चिंता र डर को प्रतिक्रिया को दबाने को क्षमता।
धेरै प्रयोगकर्ताहरु द्वारा यसको प्रभाव को अवधि को लागि नींद को अवमूल्यन को प्रभाव को कम गर्न को रिपोर्ट।
यसको सहनशीलता बढेर हाम्रो शरीरमा चिसो असरहरू घटाउनुहोस्।
अध्ययन र सिक्नको लागी
फेनेलप्पासिटाम पाउडरका फाइदाहरू विशेष गरी अध्ययन र सिक्नको लागि उपयोगी हुन्छन्। यसको उत्तेजना प्रकृति अन्यथा नीलो बिस्तारै क्रिम सत्र, सबभन्दा पहिले फोकस सहायता, वा केवल एक सामान्य संज्ञानात्मक अध्ययन वृद्धिको लागि ठूलो हो। मेमोरीमा यसको प्रभाव पूर्ण प्रतिधारण वृद्धिको लागि अनुमति दिन्छ। सामान्य अध्ययनको लागि प्रेरणा र मूड वृद्धि पनि अनुमति दिन्छ। अन्तमा, तनाव र चिन्ताको प्रभावलाई कम गर्न यसको क्षमताले दबाबमा राम्रो अध्ययन गर्न अनुमति दिन्छ।
फिनेलिप्पाटेटाम पाउडर काम गर्ने र एथलेटिक प्रदर्शन बढाउनको लागि पनि उत्कृष्ट छ। यसले तपाईंको शरीरमा तनावको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्छ, जुन एथलीटको लागि अमूल्य छ, थाम, पुनःप्राप्त र सहनशीलता बढ्दै जान्छ। यो बलियो बढ्दो सहिष्णुताले तपाईंको शरीरको सहिष्णुतालाई चिसो बढाउँछ।
फेनिलप्पासिटाम पाउडरले एम्फेटामिनको जस्तै ऊर्जा पनि प्रदान गर्दछ। क्याफिन जेटरहरू बिना सफा, ध्यान केन्द्रित, उत्प्रेरित ऊर्जाले कामआउट वा प्रतियोगिताहरूमा आफ्नो प्रदर्शन अनुकूलन गर्न मद्दत गर्न कम्पाउन्डमा आदर्श छ। त्यहाँ पनि कैफिनको तुलनामा पनि कुनै दुर्घटनाको लागी कम छ।
व्यावसायिक एथलीटहरूले ध्यान दिनुपर्छ कि फिनेलिप्चेटाइम पाउडर विश्व विरोधी डओपिंगको प्रतिबन्धित पदार्थ सूचीमा छ र तदनुसार फेनिलप्पासिटाम पाउडर पूरकमा निर्णय गर्नुपर्छ।
कार्फाइड पाउडर वीएस. पिराक्कैम पाउडर
कार्पाडोनको ढाँचा धेरै नै पिरासिटामसँग छ र दुवै 100% बायोभेट उपलब्ध हुन्छ जब मुखले र तिनीहरूको समान आधा-जीवन छ। त्यसैले किन कार्पhedन (फिनेलिप्पाटाम) पाउडर पिरासिटामलाई उचित मानिन्छ?
Carphedon पाउडर पिरासिटाम भन्दा बढी 60 पटक जस्तो शक्तिशाली हुन्छ, यसको मतलब यो परिणाम हेर्न को लागी एकदम कम Carphedon पाउडर लिन्छ। यो मतलब छैन कि Piracetam को उच्च खुराक ले Carphedon पाउडर को रूप मा एक नै परिणाम को पेशकश गर्नेछ। वास्तवमा, अधिक Piracetam लिने एक निश्चित बिन्दु पछि कम परिणामहरू प्रस्ताव गर्नेछ, तर यसले दुबै प्रभावहरूको अनुभव गर्नेछ।
कार्नेडोन पाउडर सिर्जना गर्नको लागि प्यानेसिलममा थपिएको फिनेल समूहले यसलाई प्रभावहरूको व्यापक दायराको अनुमति दिन्छ र फोकसलाई तीव्र बनाउन र प्रतिक्रियाको समय सुधार गर्न अधिक सक्षम बनाउँछ।
कार्फाइड पाउडर वीएस. NOOPEPT पाउडर
कार्पडोन पाउडरको तुलना गर्न नपपिपीको तुलना गर्नु गाह्रो छ किनकि तिनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत प्रविधि र विपन्नसँग दुई धेरै फरक पदार्थ हुन्। यो वास्तवमा व्यक्तिगत मस्तिष्क रसायन विज्ञानमा निर्भर गर्दछ र यसले तपाईंलाई कसरी असर गर्छ।
कार्पडोनको पाउडर 1,000 पटकको विरोधको रूपमा नैपपept पिरासिटाम भन्दा 60 पटक अधिक शक्तिशाली मानिन्छ। यो मात्र अर्थ छ कि यसले परिणाम दिनको लागि कम लिन्छ, तर यदि यसले प्रभाव पार्ने प्रभावहरू छैन भने, यसले वास्तवमा यसलाई कसरी प्रभाव पार्छ वास्तवमा फरक छैन।
नोपपिप्टर र कार्स्पेडोन पाउडर दुवैसँग सहनशीलताको निर्माणको सम्भावना छ। त्यहाँ दुई पदार्थहरूको तुलनामा धेरै अध्ययनहरू छैनन्, त्यसैले अझ राम्रो छ के रूप मा एक विषयगत निष्कर्ष आकर्षित गर्न गाह्रो छ।
कार्फाइड पाउडर वीएस. PRAMIRACETAM पाउडर
यहाँ दुई नोटोप्रो पदार्थहरू छन् जुन तुलना गर्न सकिन्छ। एक एक अध्ययन नोटोप्रोकको रूपमा चिनिन्छ, अर्को एक अत्यधिक फोकस पूरक। दुवै नोट्रोपिक्स प्रयोगकर्ताहरूसँग राम्रोसँग चिनिन्छन् र दुवै महँगो पक्षमा छन्।
Carphedon पाउडर को प्रयोगकर्ता रिपोर्ट र फेनेलप्पाटेमम पाउडर प्रभाव को नाटकीय रूप देखि भिन्न हुन्छ। केही प्रयोगकर्ताहरूले शक्तिशाली परिणामहरू देखाउँछन्। अन्य प्रयोगकर्ता रिपोर्टहरू भन्छन् कि यसले कुनै प्रभाव वा खराब गर्न छोडेन, यसले उनीहरूलाई थकित र उनीहरूको सोचमा लगाइदिन्छ। फिनेलिप्पाटेमम पाउडर लिने सबैभन्दा राम्रो तरिकामा हाम्रो पूरा गाइड हेर्नुहोस्।
Carphedon पाउडर प्रयोगकर्ताहरूले केहि दिन भित्र केहि दिनहरुमा, चाँडै सहिष्णुता निर्माण गर्न लाग्दछ। रिपोर्टहरूमा आधारित, सहनशीलता निर्माण गर्न कति लामो समयको अनुमान अप्रत्याशित जस्तो लाग्छ। यो एकदम सम्भव छ कि प्रयोगकर्ता रिपोर्टहरूमा विभेदको कारणको कारण यो हो कि केहि आपूर्तिकर्ताहरूले नकली कार्स्पडोन पाउडर बेच्न सक्छन्।
अर्कोतिर Pramiracetam, प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै भरोसेमंद परिणामहरू प्रदान गर्न लाग्छन्। Pramiracetam Carphedon पाउडर पहिले वर्ष विकसित भएको थियो र आफनो नोब्रोपिक्स को बीच साबित गरेको छ। निस्सन्देह, Carphedon पाउडर संग केहि समस्याहरू सप्लायर समस्याहरूको कारण हुन सक्छ। अब कि अधिक व्यक्ति यसको बारे मा जान्दछ र यसको लागि सोध्नु हुन्छ, अधिक सम्मानित नोट्रोपिक रिटेलरहरू यसलाई सुरू गर्न सुरु गर्दै छन्।
कारवाडोन पाउडर र प्रिमिरसिटाम दुवै प्रयास गर्नुहोस्, केवल सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ एक सम्मानित वितरकबाट खरिद गरिरहनु भएको छ ताकि तपाईलाई थाहा छ कि तपाई उच्च गुणस्तरको उत्पादन प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईं एकअर्कालाई एकअर्कालाई प्राथमिकता दिन सक्नुहुन्छ, वा तपाईले दुवै र साइकल साइकल प्रयोग गरी अपरिपक्व सहनशीलताको निर्माण गर्नबाट बच्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले चाहानु भएको परिणामहरू दिन राम्रो स्ट्याक पत्ता लगाउनुहोस्।
Phenylpiracetam कच्चा पाउडर:
Phenylpiracetam पाउडर मार्केटिंग:
Carphedon पाउडर को खरीद कसरि: AASraw देखि फिनेलिप्पाटेमम पाउडर खरीद गर्नुहोस?
Dr. Patrick Young on साइप्रोटेरोन मध्यवर्ती पाउडर (२2701०१-50०-०)
माइकल McCoy on साइप्रोटेरोन मध्यवर्ती पाउडर (२2701०१-50०-०)